यूरोपीय चुनाव र FvD सुरक्षा नेट ('आप्रवासनहरूको उदाहरणद्वारा बलात्कार'): मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	20 मई 2019 मा	• 1 टिप्पणी
तपाईंको आँखामा यो फरक पर्दैन, तर थियरी बाउडेटले यो चहचहानामा आज बिहानको चहचहानामा पोस्ट गरेको भिडियो, म डबल डबलको साथ शुद्ध प्रचार। सुरु गर्नका लागि, मलाई लाग्छ कि भिडियोमा मान्छे सबै ट्रान्सगेंडर व्यक्तिको बारेमा हुन् र हामी पहिचान गर्छौं (जस्तै साइटमा पहिले उल्लेख गरिएको हो) नाम एक अन्तको साथ 'a'; के नयाँ मानक ट्रान्सगेंडर मानिसहरूलाई। हामीले ती बलात्कारहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छैन। साथै, यो 'मुस्लिम आप्रवासी' को बारे मा पश्चिमी पश्चिमी जनसंख्या को खतरा को रूप मा तैयार छ।
यहाँ फेरि हामी स्पष्ट तरिकाले नियन्त्रण शम विरोधीको खेललाई चिन्न सक्छौं। यो स्पष्ट छ कि युरोप आप्रवासियों संग बाढी जा रहेको छ, तर जो मान्छे यो तरिका ले युद्ध द्वारा पीछा गरदै छन् को बारे मा केहि गर्न सक्दैन। त्यहाँ एक ठूलो एजेन्डा छ कि पछि र थियरी Baudet यो तपाईंको लागि रोक्न छैन।
पहु। गोसबम्प्स। र यति सत्य। आवाज #FVD मौलिकता आव्रजन नीति परिवर्तन गर्न। 23 मे मई pic.twitter.com/sVM3SSvHSV
- थियरी Baudet (@thierrybaudet) 17 मई 2019
थियरिरीले मात्र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई हेर्छ कि हामी सारा युरोपमा बढ्दै जान्छौं। यो दाँयामा नियन्त्रित बल क्षेत्र हो जुन हामी सबै पड़ोसी देशहरूमा देख्छौं र यो समूहले ब्रेक्सिट र यो सबै आर्थिक अराजकताको विफलताको लागी चाँडै दोषी हुनेछ। तिनीहरू Brexit, Nexit, Frexit (र तपाइँलाई यो नाम) प्रतिनिधिहरू हुन्। तिनीहरू ई-इ-इ-इ इण्टिभेसन च्यानल। तिनीहरू यसलाई पनि ईन गर्न सक्छन्। तिनीहरू एक सुरक्षा नेटमा जलवायु नीति र अन्य समस्याहरूको आलोचनाको मार्गदर्शन गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न मतभेदहरू सधैं देखाउँछन् कि जनसंख्याको बीचमा युरोपियन युनियनका महान भावनाहरू छन्। मापने जान्छ र यसैले यी सुरक्षा जालहरू दृढतापूर्वक सेट अप गर्दै छन्। यदि निम्न एकदम छिटो बढ्छ भने, मध्यवर्ती बमहरू सक्रिय हुन्छन्। हामीले हालैमा यसको साथ हेर्यौं FvD माथिमा गोरखा.
मेरो थप विस्तृत व्याख्या पढ्नको लागी नीलो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् कसरी नियन्त्रण गर्ने विरोध गर्दछ। हामी थियरिरीको ट्वीटरबाट स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं कि उनी सुरक्षा नेट रणनीतिकर्ताको रूपमा तैनात शक्तिको मोहरा हो। अन्ततः, जब जहाज माछा माछा माछा माछाको ढुङ्गा झरेको छ, दुबै तलमा बमहरू सक्रिय हुनेछन् र त्यो जहाज जुन जहाजमा चकित हुनेछ र खण्डमा खसेको छ। यस तरिका, मान्छे को निश्चित समूह संग 'साजिश विचार' (घोंघा) संग निश्चित रूप देखि व्यवहार गर्दछ। थियरी Baudet जुन ब्रान्ड हो जुन सबै समूहका अन्य सहभागीहरु संग मान्छे को समूह को चिन्हित गर्ने अधिकार मा प्रयोग गरिन्छ। जब बिल आउँछ, फेरि फेरि आलोचना को आवाज बनाउन को हिसाब छैन, किनकि यो Baudet ब्रान्ड (र यसको यूरोपीय साथी) र चरम दाँया संग जोडिएको छ। कामदार र स्मार्ट, तर यो नियन्त्रित विरोधको उद्देश्य हो। यस बीच, केही अवैध विज्ञापन र नयाँ ट्राभल मानकमा प्रयोग गरिरहेको पनि हुन सक्छ।
ट्याग: Baudet, EU, युरोपियन, विशेष, FvD, आप्रवासन, मुस्लिम, प्रचार, Thierry, सुरक्षा नेट, चुनाव, बलात्कार
RA Imthorn। लेखे:
20 मई 2019 मा 17: 23
के त्यहाँ यो वास्तवमा यति थोरै व्यक्तिहरू छैनन्?
मैले मेरो वरपरका मानिसहरूसँग धेरै कुरा गर्छु, जसले टिप्पणी र टिप्पणीहरू दिन्छ, तर यदि तपाइँ समाचारलाई पक्का गर्न थाल्नुहुन्छ, उनीहरूले मलाई टिप्पणी गर्नेछ।
यसैले म सादामा रहन चाहान्छु, र सबैलाई राम्ररी पकाउन चाहन्छु।
« डनकन गाउन असमर्थ छ र यूरोभाइज गाउ प्रतियोगिता प्रतियोगिता (एलजीजीईटीपी प्रोभान्स) मार्फत आएको छ।
विल्सन बोल्डविजिनसँग टेलिफोन टेलिभिजन डे डेग्राग्राफबाट: साजिश सिद्धान्तको बारेमा श्रृंखला »
कुल भ्रमण: 14.542.303
विल्फ्रेड बेकर op बच्चाहरूलाई दबाब दिईएको ठूलो छ!